Malite na $ 60
Otu n'ime ebumnuche nke atụmatụ ịzụ ahịa bụ ịmepụta ihe oyiyi akara dị mma. Ịchọrọ ka ndị mmadụ hụ gị n'ụzọ dị mma. Nke a bụ ebe ahịa gụnyere ahịa na-abata. Ọ na-enyere aka hụ na…
Ihe dị iche iche nke YouTube na-eme ka mgbasa ozi YouTube bụrụ ngwá ọrụ na-aga maka ndị na-ere ahịa ika chọrọ ịmepụta mmetụta na oghere dijitalụ. Na-ekwu maka YouTube, ikpo okwu nkekọrịta vidiyo nke Google nwere, enwere…
Ọ nweghị ịgọnarị eziokwu ahụ na vidiyo YouTube ndị edeziri nke ọma na-enweta ntinye aka kacha site n'imezu ebumnuche ha bu n'obi izisa ozi. Ma nke ahụ bụ ebe ihe ịma aka dị. O nwere ike ịbụ na ị nwere…
Ka e were ya na ị mepụtara vidiyo ezubere iche maka puku afọ. Ị biputere vidiyo ahụ na YouTube wee kesaa ya na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche, mana maka ihe ụfọdụ, ị nweghị ike ịhụ…
N’ụwa nke anyị bi n’ime ya taa, e nwere ọtụtụ afọ ojuju. O nwere ike isiri gị ike ịdọta uche ndị na-ege gị ntị. Ndị na-ekiri gị na-agwụ ike ma na-adọpụ uche ngwa ngwa. Ọ bụrụ…
Ịmepụta mgbasa ozi zuru oke chọrọ ọnwa iji dee edemede ahụ, zuo oke, ịkọ akụkọ, ịgbapụ, na njedebe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ezigbo onye mmekọ mgbasa ozi, mbọ ahụ niile nwere ike ịla n'iyi. Mgbasa ozi YouTube ziri ezi…
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ dị ka influencer, ị ga-amarịrị ka mkpado dịruru ná njọ. N'okwu dị mfe, mkpado bụ akpaokwu nke ị na-eji maka ịmata akara gị. Ọ na-egosipụta njirimara gị yana…
YouTube bụ ikpo okwu ọdịnaya vidiyo kachasị ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-eji ya n'ụzọ ziri ezi, ọ nwere ike inyere gị aka iru ton nke ọhụrụ ahịa. Otú ọ dị, nke a dị mfe ikwu karịa ime. Na ọtụtụ…